भोली देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सेवा ठप्प हुने:: Naya Nepal
भोली देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सेवा ठप्प हुने
काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले भोली आइतबार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक र कोभिड-१९का सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले आफ्ना सबै शाखा, देशभरका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको छ।
सरकारले डा केसीको जीवन रक्षाका लागि गम्भिरता पूर्वक नलिएको भन्दै वाध्यतावस सेवा ठप्प पार्ने अवस्था आएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
संघले शुक्रबार नै उक्त विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार सरकारी वार्ता टोलीसँग सकारात्मक रुपमा छलफल अगाडि बढेपछि संघले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर शुक्रबारको छलफलमा सरकारले वार्तालाई सकारात्मक रुपमा अगाडि नबढाएको र शनिबार २७ औं दिनमा पनि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संघले सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
संघले भोली आइतबार पनि डा केसीको सत्याग्रह अन्त्य नभएको अवस्थामा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने कुरा पनि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको माग
झापा, असोज २४ । कोरोनाभाइरसको कारण देखाउँदै झापामा कालोबजारी मौलाउँदासमेत नियमनकारी निकाय बेखबर बनेको छ ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा परेको सरोकारवालाले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि तत्काल बजारको प्रभावकारी र पारदर्शी अनुगमन गर्नुपर्नेमा भापाको उपभोक्तावादी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा उपभोक्तावादी संस्थाबीच भएको छलफलमा उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
कोभिड-१९ को कारण सरकारले गरेको ‘लकडाउन’ र सीमानाका ‘सिल’ हुँदा हाल चाडपर्वको मुखमा बजारमा मूल्यवृद्धि उत्कर्षमा पुगेपनि तीन तहका सरकारले बजार अनुगमन नगरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल झापाका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बा बताउनुहुन्छ ।
बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गरिएका घटना सार्वजनिक भएपनि आमउपभोक्ताको हितमा स्थानीय सरकारलेसमेत काम गर्न नसकेको विश्व उपभोक्ता महासंघ झापाकी अध्यक्ष सरस्वती चम्लागाईको भनाइ छ ।
बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न आमउपभोक्तावादी संस्थासमेत जुट्नुपर्ने एकथरीको भनाइ छ ।
सरकार एक्लैलेमात्रै कालोबजारी रोक्न नसक्ने हुँदा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले मागसमेत उठाएका छन् ।
बजारमा सामान खरिद गरिएपछि उपभोक्ताले बिलसमेत नपाउने गरेको र बिल मागे उपभोक्तालाई व्यवसायीले सामान नै नदिँदा सरकारले कारबाही गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
उपभोक्ताको हित रक्षाका लागि तीन तहका सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीले मूल्यवृद्धि र तौलको अनियमितता नियन्त्रण, गुणस्तरीय तथा स्वस्थ वस्तु उपलब्धताको ग्यारेन्टी, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही र त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लास्थित १५ ओटै स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभागीय कार्यालयसमक्ष मागसमेत गरिएको छ ।
२४ असोज, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले भोलि आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
२७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको र वार्तालाई सिमित गराएको भन्दै संघले आइतबार आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२५ गतेसम्म सत्याग्रह अन्त्य नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी छ ।
डा. केसीले ६बुँदे माग राखेर २९ भदौमा अनसन थालेका थिए । अनसनको २४औं दिन सरकारले वार्ता टोली बनाएपछि बिहीबार र शुक्रबार वार्ता पनि भएको थियो । डा. केसीको तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष समेत सदस्य छन् ।
तर सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शनिबार मात्र सरकारी वार्ता टोलीले कोभिड-१९ को महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको विषम परिस्थितिलाई मनन गर्न अनसन अन्त्य गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।